Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - 3.3 Vose Ongororo kukanganisa framework
Total Kuongorora kukanganisa = kumiririrwa kukanganisa + nekuyera zvikanganiso.
Inofungidzira kuti inobva kuongororo yekuongorora inowanzosakwana. Izvi zvinowanzoitika kuti pane musiyano pakati pehuwandu hunokonzerwa neongororo yekuenzanisira (semuenzaniso, inofungidzirwa kuenzana nekureba kwevadzidzi vari muchikoro) uye kukosha kwechokwadi muhuwandu (semuenzaniso, chaiyo yevhareji yakakwirira yevadzidzi muchikoro). Dzimwe nguva zvikanganiso izvi zviduku zvokuti hazvina maturo, asi dzimwe nguva, zvinosuruvarisa, zvinogona kunge zvakakura uye zvakakosha. Mukuedza kunzwisisa, kuyera, uye kuderedza zvikanganiso, vatsvakurudzi zvishoma nezvishoma vakagadzira imwe chete, yepamusoro yekugadzirisa mafungiro ezvikanganiso zvinogona kuitika muongororo yekuongorora: iyo yose yekuongororwa kukanganisa sarudzo (Groves and Lyberg 2010) . Kunyange zvazvo kukura kwegadziriro iyi yakatanga muma1940, ndinofunga kuti inotipa pfungwa mbiri dzinobatsira kutsvaga tsvakurudzo muzera re digital.
Chokutanga, sarudzo yekuongororwa kwesarudzo inotsanangura kuti kune marudzi maviri emakanganisa: kusarura uye kuchinja . Zvichida, kukanganisa kunokonzera kukanganisa uye kusiyana kunokanganisa kusanganisa. Mune mamwe mazwi, fungidzira kushandurwa kwechiuru chikamu chemuongorori umwechete wekuenzanisira uye ipapo kutarisa kugoverwa kwekufungidzirwa kubva kuzviuru izvi zvuru. Iko kushamwaridzana ndiko musiyano pakati pezvinoreva zvekudzokorora uku uye kukosha kwechokwadi. Kusiyana uku ndiko kuchinja kwezviyero izvi. Zvose zvese zvakaenzana, tinoda nzira iyo isina nharo uye zvishoma. Zvinosuruvarisa, kune dzakawanda matambudziko chaiwo, zvakadai zvisina-kusarura, zviduku-kusiyana kune zvisiripo, zvinoita kuti vatsvakurudzi vari munzvimbo yakaoma yekugadzirisa kuenzanisira matambudziko anounzwa nekusarura nekusiyana. Vamwe vatsvakurudzi vanozvimirira vanosarudza nzira dzisina kukodzera, asi pfungwa imwe chete inofungidzira kusarura inogona kunge yakanganisa. Kana chinangwa chirikubudisa chiyero chiri pedyo nekukwanisika kuchokwadi (kureva,, pamwe nekanganiso shomanana inogona kuitika), iwe unogona kunge uri nani kune imwe nzira ine zvinyararire zvishoma uye zvishoma kusiyana kune asingabatsiri asi ane kusiyana kukuru (mufananidzo 3.1). Mune mamwe mazwi, nhamba yose yekuongororwa kukanganisa inoratidza kuti kana ukaongorora tsvakurudzo yekuongorora, iwe unofanira kufungisisa zvose zvakasarudzwa uye kusiyana.
Mufananidzo 3.1: Bias uye variance. Zvinotarisirwa, vatsvakurudzi vaizove vasina-kushamwaridzana, kuderera-kuenzana kwekuenzanisa nzira. Muzvokwadi, ivo vanowanzofanira kuita zvisarudzo zvinogadzira kushandiswa-kubva pakati pezvakasiyana nekusiyana. Kunyange zvazvo vamwe vanotsvakurudza zvisizvo vakasarudza nzira dzisina kukodzera, dzimwe nguva zviduku-zviduku, zviduku-kuchinja nzira zvinogona kuwedzera kuongororwa kwakajeka kudarika kusaruramisira kunopesana zvakasiyana.
Chipiri chekujekesa kukuru kwekuongororwa kwepfungwa yekukanganisa, iyo ichagadzirisa zvizhinji zvechitsauko ichi, ndeyekuti kune zvikonzero zviviri zvekukanganisa: zvinetso zvine chokuita neye waunotaura naye ( mumiririri ) nezvinetso zvine chokuita nezvamunodzidza kubva pane zvidzidzo izvi ( chiyero ). Semuenzaniso, unogona kunge uchida kuongorora mafungiro pamusoro pekuchengetedzwa kwepaIndaneti pakati pevanhu vakuru vanogara muFrance. Kuita izvi kuongororwa zvinoda mapoka maviri ezvinyorwa. Kutanga, kubva pane mhinduro dzavanopindura, iwe unofanirwa kuderedza mafungiro avo pamusoro pekuchengetedza pakombiyuta (iyo inetso yekuyera). Chechipiri, kubva kune mafungiro asina kufanira pakati pevakapindura, unofanira kutora mafungiro ehuwandu hwevanhu vose (iyo idambudziko rekumiririra). Shanduro yakakwana nemibvunzo yakaipa yekuongorora inobereka maitiro akaipa, sezvinozoipa zvakakosha nemibvunzo yakakwana yekuongorora. Mune mamwe mazwi, kuongororwa kwakanaka kunoda nzira dzakanaka dzekuyera uye kumiririra. Zvichibva mumamiriro ezvinhu aya, ndichadzokorora maitiro ekuongororwa kwevanotsvakurudza vakafunga nezvekumiririra nekuenzanisa munguva yakapfuura. Zvadaro, ndicharatidza kuti maonero pamusoro pekumiririra uye kuenzanisa kunogona kutungamirira tsvakurudzo yemakore ekuongorora dhigirii.